Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay Isku Aadka Wareega 8 Europa League Oo Maanta La Sameynayo %
Guul ay Arsenal kaga gaartay xalay dhigeeda AC Milan ayaa waxay ku dartay liis kooxaha 8-da ah, kuwaasoo uu iska xaadiriyey wareega Sideed dhamaadka Europa League.
Kooxaha kala ah: Atlético, Sporting CP, Marseille, Leipzig, Lazio Arsenal, CSKA Moskva iyo Salzburg, ayaa waxay usoo baxeen wareega Sideed dhamaadka koobkan.
Isku aadka wareega Sideed dhamaadka tartankaan, ayaa wuxuu dhici doonaa 15:00 Galabnimo, oo maanta oo Jimco ah, iyadoona lagu qaban doono isku aadkaas Magaaladda Nyon, oo ka tirsan wadanak Switzerland.
Isku aadka ayaa waxaa la sameyn doonaa kadib markii la sameeyay midka tartanka Champions League, waxaana kala socon doontaa Laacib.so hadii uu ALLE raali ka noqdo.
Ma jiro wax sharci cusub ah, kaasoo tartankaan lagu soo kordhiyay, taasoo ay ugu weyn tahay in aysan isku beegmi karin kooxaha isku dalka kasoo jeeda, taasoo aan dhici doonin maanta, maxaa yeelay wareegaan waa sidaas.
Arsenal ayaa waxaa laga cabsi qabaa inay ku aado kooxda Atletico Madrid, inkastoo ay macquul tahay in aysan dhicin arrintaan.
Borussia Dortmund iyo CSKA Moscow, ayaa sidoo kale macquul ah in Arsenal ay ku aado, maadaama marka aysan isku soo arkin wareegaydii kale ee tartankaan.
Sikastaba, marka la sameeyo isku aadka wareega Sideed dhamaadka tartanka Europa League, ayaa waxaa la dheeli doonaa lugtiisa koowaad 5-ta bisha April, ee sanadkaan 2018, sidoo kale lugta labaad ayaa waxaa loo madalsan yahay in la dheelo 12-ka isla bishaas.